Mmetụta M Mbụ - Geofumadas
My mbụ echiche
Supermap - siri ike 2D na 3D GIS ihe ngwọta zuru oke
Supermap GIS bụ onye na-eweta ọrụ GIS dị ogologo nke nwere ndekọ egwu kemgbe ọ malitere na ọtụtụ ngwọta na ọnọdụ geospatial. E guzobere ya na 1997 site na otu ndị ọkachamara na ndị nyocha na nkwado nke Academylọ Akwụkwọ Ọzụzụ Ndị China, ntọala ya nke ...
Bentley Systems BIM My mbụ echiche
Anya mbụ: Dell Inspiron Mini 10 (1018)
Ọ bụrụ n ’ị na - eche ịzụ Netbook, ikekwe Dell mini 10 nwere ike bụrụ nhọrọ. Na ọnụahịa ọ bụ ihe dị ka US $ 400, nke dị n'okpuru nke mbụ Acer Aspire One na mbụ. Ọ bụ ihe ma ọ bụ ihe na-erughị (ihe na-erughị karịa) dịka Acer D255-2DQkk, na-akọwapụta na ụdị a (1018) ugbua ...
Acer nwewa Dell Mini My mbụ echiche
Engineering, mbụ echiche
Followinggbaso ịzụta Trimble nke Ashtech, Spectra amalitela ịkwalite ngwaahịa Mobile Mapper. Nke kachasị mfe bụ Mobile Mapper 10, nke m chọrọ ile anya n'oge a. The Mobile Mapper Pro, CE na CX nsụgharị kwụsịrị ebe ahụ ọ bụ ezie na nke ahụ ka dị n'ahịa ...
gps My mbụ echiche
cadastre, Apụta, GPS / Equipment, innovations, mbụ echiche
Bentley Map PowerView V8i, mbụ echiche
Enweela m ụdị nke PowerView V8i Select Series 2 (Version 8.11.07), ọnụ ala dị oke ọnụ na mpaghara nkewa nke Bentley na-atụ anya iji ya. Na mbu, ewepuola m obi abụọ m n’ozi mbu mgbe m gosiri ahịrị atọ nke mpaghara ahụ maka afọ 2011. Iji malite, kama ịbụ otu ...
Bentley Systems My mbụ echiche
A na ele anya na gvSIG 1.10
Mgbe ụbọchị ole na ole nke na-agagharị gvSIG 1.9, enweghi m ndidi maka chinchi na nsụgharị ahụ na nsogbu ndị ọzọ, taa m laghachiri na nsogbu gvSIG. Enweghị emetụ sọftụwia a aka ogologo oge abarala m uru, n'ihi na ịmepe ụdị ọhụrụ a ma jiri ya tụnyere foto m nwere site n'oge ahụ bụ ...
AutoDesk Bentley Systems ESRI gvSIG oS My mbụ echiche QGIS
Geospatial - GIS, GvSIG, mbụ echiche
Ashtech weputara usoro ohuru nke akụrụngwa ya, nke egosiri na ESRI International Conference na nso nso a, nke a na-akpọ Mobile Mapper 100, nke bụ mgbanwe na njirimara nke Mobile Mapper 6 mana nwere oke ziri ezi karịa ProMark3. Na isi, nke a bụ otu m kwenyere na Magellan ga - ejide ...
ESRI gps My mbụ echiche
Ile anya na ArcGIS 10
Ka ọ na-erule June 2010, e kwuwo na ArcGIS 10 ga-adị, nke anyị hụrụ ga-abụ ihe dị mkpa dị mkpa, na-amata ọkwa ọkwa nke ESRI n'ọhịa. Enwerela okwu zuru ezu na ọgbakọ na oghere ndị ọzọ, ma n'ezie n'etiti ugbu a na Nzukọ Ndị Ọrụ July, anyị ga-enwe ike ịmatakwu ihe. Ikwu…
ESRI My mbụ echiche
ArcGIS-ESRI, Geospatial - GIS, innovations, mbụ echiche
TopoCAD bu uzo di nkpa ma buru oke nkenke maka nyocha, eserese CAD, na nhazi injinia; ọ bụ ezie na ọ na-eme ihe karịrị nke ahụ na mgbanwe nke were ya karịa afọ 15 mgbe amụrụ ya na Sweden. Ugbu a ọ gbasaa n'ụwa niile, n'asụsụ 12 na mba 70 n'agbanyeghị na ọ dị ka ọ enwetabeghị ...
AutoDesk Bentley Systems DGN dwg ESRI gps kml My mbụ echiche shp
ArcGIS-ESRI, GPS / Equipment, Engineering, topografia
Oge 6 nke obi ike maka ConstrucGeek
Ana m akwado iwepụta oge iji mata blọọgụ ahụ, nke na-eru otu afọ ọrụ. Echere m ConstrucGeek, nkeji isii ị na-atụ anya iji gụọ akwụkwọ geofumed ọhụrụ kwesịrị itinye ego na blọọgụ a. Enwere uzo abuo: na ị ghọtara na isiokwu CAD metụtara injinia abụghị ...
blog My mbụ echiche
AutoCAD-AutoDesk, Engineering, innovations, mbụ echiche